SIHH 2019: ပထမဆုံးသတင်း - မြင့်မြတ်သောစိတ်ကူးအိပ်မက်
အဆိုပါသတင်းအတွက် ဆိ နာရီ
ဆစ် 2019: ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း
လာမယ့်နှစ် Salon International de la Haute Horlogerie အတွက်ဘာအသစ်တွေလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။
ဇြန္လ 29, 2018
ချိတ်ဆက်, တိုတောင်းနှင့်ကြည့်ရှုရန်နှင့်တွေ့ကြုံခံစားရန်ပိုမိုနှင့်အတူ။ ဤတွင် SIHH 2019 ထုတ်ဝေမှုသို့ပထမဆုံးအကြိမ်မြင်တွေ့ရမည်။
Tသူကလာမယ့် Salon အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ de la Haute Horlogerie (ဆိ) ဇန်နဝါရီလ 14-17 ရာအရပျကိုယူပါလိမ့်မယ်။ မနက် ၈း၃၀ မှည ၈း၀၀ နာရီအထိပုံမှန်အားဖြင့်ငါးနာရီ၊ ကြာကြာဖွင့်ချိန်လေးရက်အစားလေးရက်။
ဂျီနီဗာကို SIHH အတွက်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသည့်နေရာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်မှရေပန်းစားသောအစပြုလုပ်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့တွင်ညနေ ၁၀ နာရီအထိအထူးညဥ့်နက်သည့်အချိန်တွင်အများပြည်သူအတွက်တံခါးများဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့သောသုံးခုထုတ်ကျော်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အရေအတွက်တိုးများလာပြီးနောက် SIHH 2019 သည်စုစည်းထားသည့်လိုင်းကိုပြသသည်။ 35 ပြသခဲ့သည်, အရာတို့ပါဝင်သည် 18 သမိုင်းဝင် Maisons နှင့် 17 သီးခြားလွတ် အဆိုပါCarré des Horlogers ၌တည်၏။
သမိုင်းဝင် Maisons များအကြားကသတိပြုမိရန်ဖြစ်ပါသည် ဆိုက်ရောက် BOVET, 1822 တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Bovet 1822 - အလှမယ် Audrey
တည်ထောင်ထားသောအမည်များနှင့်လက်ပတ်နာရီအသစ်၏ကိုယ်စားလှယ်များအကြားဤဟန်ချက်ညီမှုသည်မျက်မှောက်ခေတ် Fine လက်ပတ်နာရီလုပ်ငန်း၏ရှုထောင့်အမျိုးမျိုးကိုထင်ဟပ်စေသောဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်မှာသံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိ။
SIHH အလွန်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ SIHH ကိုကမ္ဘာသို့ဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရန်ဤနည်းဗျူဟာသည်တရားမျှတမှုကိုသတ်မှတ်သောသီးသန့်သီးသန့်ဖြည့်စွက်သည့်အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာ၏လွှမ်းမိုးမှုလွှမ်းမိုးမှုနှင့် Instagram (Instagram နီးပါး) တွင်ဖြစ်ပျက်ပုံများ၊ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်မည်သို့လွှမ်းမိုးနေသည်ကိုလူတစ် ဦး မှထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကလျစ်လျူရှု။ မရတော့သောအရာ။
ဒီအောင်မြင်သောပွဲ ဦး ထွက်မှဆက်လက်, ထို့ကြောင့် SIHH Live သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည် တစ် ဦး ပင်ကြီးကျယ်တဲ့စကေးပေါ်မှာ။ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ ဆွေးနွေးမှုများနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာကျယ်ပြန့်သောအစီအစဉ်သည်ပြပွဲ၏နိုင်ငံတကာရောက်ရှိမှုကိုအထောက်အကူပြုစေပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ Fine Watchmaking ၏လိုလားမှုကိုတိုးပွားစေသည်။
SIHH သည်အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်သည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုသာမကကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကြုံတွေ့နိုင်သည်။ နောက်လာမည့်နှစ်တွင်ဂျီနီဗာမြို့၌ထပ်မံမျှော်လင့်ကြသော visitors ည့်သည် ၂၀၀၀၀ သည်
A.Lange & Söhne, Audemars Piguet, Baume & Mercier, BOVET, Cartier, Girard-Perregaux, Greubel Forsey, Hermes, IWC, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Panerai, Parmigiani Fleurier, Piaget, ရစ်ချတ် Mille, ရော်ဂျာ Dubuis, ulysse Nardin, vacheron Constantine.
Armin Strom, Christophe Claret, Chronométrieဖာဒီနန် Berthoud, DeWitt, FPJourne မှélégante, Grönefeld, အိပ်ချ် Moser & Cie, Hautlence, HYT, Kari Voutilainen ဖြစ်သည်, Laurent Ferrier, MB&F, Ressence, Romain Gauthier, RJ, စကားမပြောတတ်-Marin, Urwerk.
Tags:သတင်း • ဆိ
မှတ်ချက်0ခုဆစ် 2019: ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း"